प्रचण्डजीको नियत नै खराब छ —उपेन्द्र यादव,अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल – Maitri News
प्रचण्डजीको नियत नै खराब छ —
उपेन्द्र यादव,अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई औचित्यहीन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वय्ले पनि भारत भ्रमणलाई हल्काफुल्का रुपमा हेरेको आरोप यादवले लगाउनुभयो । प्रचण्ड कुनै पनि एजेण्डा लिएर भारत भ्रमणमा गएको जस्तो आफूलाई नलागेको पनि आरोप लगाउनुभयो । भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसवादी दलहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगरेको पनि आरोप लगाउनुभयो । प्रचण्ड चार दिने औपचारिक भारत भ्रमण सकेर आजै नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ । तर, उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको मधेसी मोर्चा र त्यसमा संलग्न एक दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने प्रचण्डको भारत भ्रमण घुमफिरका लागि जस्तो मात्र भएको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसका मुद्धामा सामान्य पनि छलफल नगरेको भन्दै मधेसका मुद्धालाई छिनोफानो नगरी प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण गर्नुको समेत औचित्य नभएको बताउनु भएको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित भएर मैत्री न्युज डटकमले यादवसँग गरेको कुराकानीः
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरि आज स्वदेश फर्किदै हुनुहुन्छ । उहाँको भारत भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँको भारत भ्रमणलाई अति सामान्य रुपमा लिएको छु । नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भारत जाने हतारो हुन्छ । उहाँले पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सबै भन्दा पहिला भारत नै जाने हतारो गर्नुभयो र उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभयो । भारतले पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सबै भन्दा पहिला भारतमै निम्तो गर्छ । उहाँ त्यही अनुसार जानुभयो । पहिला–पहिलाका प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारत जाने–आउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले पनि त्यही गर्नुभयो ।
तराई–मधेसमा आन्दोलन जारी राखेका दलका मागलाई प्रचण्डले दिल्ली सरकारसँग पनि जोडदार रुपमा उठाउँने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उहाँले दिल्ली सरकारसँग त्यस्तो केही प्रस्ताव गर्नुभएन भन्ने गुनासो तपाईंहरुको छ भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ नि ?
भारत भ्रमण जानु अघि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न निकै ठूलो भूमिका खेल्नु भएका तपाईँहरुसँग समेत उहाँले सामान्य छलफलसमेत गर्नुभएन भन्ने छ नि ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण लगत्तै अमेरिका भ्रमणको तयारी गर्नुभएको छ । तपाईँहरुले उहाँलाई अमेरिका भ्रमण नगर्ने सल्लाह दिएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । के साच्चै हो ?
मधेसका मुद्धामा सरकारले केही ढिलासुस्ती ग¥यो भन्ने तपाईँहरुको गुनासो हो ?
अब हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
उहाँ आजै भारतबाट फर्किदैँ हुनुहुन्छ । अब आशा गरौँ । उहाँले अमेरिका भ्रमणलाई नै स्थगन गरेर हाम्रो समस्या समाधानमा लाग्नुभयो भने हामी उहाँलाई ठीक छ भनाँैला । तर, उहाँको नियत नै ठीक देखेको छैन ।
उहाँको नियत नै ठीक भएन भने त । तपाईँहरुले विकल्प नै खोज्नु होला नि त ?
केही समय हामी उहाँलाई विचार गर्छौ र हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ ।
नयाँ ढंगले अघि बढ्छौ भनेको के फेरि आन्दोलन गर्ने भन्ने हो ?
हो, हामी सत्तापक्ष वा विपक्षसँग कुनै सरोकार राख्दैनौँ । हामी हाम्रा मागमा सरोकार राख्छौँ । हामीले सत्तामा जान वा मन्त्री खानका लागि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गरेको होइन । हामीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नु अघि तीन बुँदे सहमति गरेका छौँ । त्यसैका आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको हो । तीन बुँदे सहमित जन्मिएको नै मुख्य भनेको संविधान संशोधन गर्ने, पुर्नलेखन गर्ने र खास गरेर मधेसका जनताका अधिकारका सवाल, आदिवासी–जनजातिका सवालहरुलाई हल गर्ने भनेर हो । त्यसैले सरकारले अरु कतातिर के भनेर अलमलिने भन्दा पनि समस्या समाधान कतातिर हो भनेर ध्यान दिनुपर्छ । हामी हाम्रा मागमा प्रष्ट छौँ । वर्तमान सरकारले हाम्रा माग पूरा गरेन भने हामी सधैँभरी काँध हालेर बस्न सक्दैनौँ, हामी विकल्प खोज्छौँ ।
भनेपछि त संविधान कार्यान्वयनमा त समस्या होला नि ?
मैले अघि माथि पनि भने । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मिलेमतोमा संविधान जारी भयो । हामी त्यो संविधानको विपक्षमा थियौँ । त्यसैबेला ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि उसले आदिवासी–जनजाति, मधेसी, उत्पिडित, दलित आदिका समस्या समाधान चासो नै देखाएन । एकलौटी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न थाल्यो । ओली सरकारको निरंकुशताकै कारण मधेस आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यति मात्र होइन । जसरी केही ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले गलत खालको संविधान जारी गरे । त्यो संविधानले विभिन्न खाले समस्या उब्जाएपछि तराई–मधेस मात्र होइन सबै तह र तप्काले आन्दोलन सुरु गरे । मधेस आन्दोलन पछि त्यसैको एक अङ्ग हो । अहिले पनि हामीले हाम्रा माग जारी राखेका छौँ माग पूरा नभएको खण्डमा मधेस आन्दोलन जारी रहन्छ ।